बबिता मादेनको पक्षपाती चिनियाँ सन्देह - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारबबिता मादेनको पक्षपाती चिनियाँ सन्देह
May 6, 2020 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
मादेनज्यूको लेख पढ्दा भारतीय मूलधाराको टेलिभिजन हेरेको भन्दा केही फरक नै परेन। निष्पक्षता भन्ने त थिँदै थिएन। तिनले समान दृष्टिकोणले हेरेकी होला भन्ने मेरो अनुमान गलत साबित भयो। चीनलाई लगाउनसम्मको आरोप र सन्देह खनाएकी रहेछिन् तर ती आरोपहरुको आधार भारतीय मिडिया भन्दा अलिकति पनि पर सरेकै छैन। विषय गहन थियो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रीय स्तरको। अलिकति त्यही स्तरमा अध्ययन गरेकी भए र आरोप लगाइहाल्न हतार नगरेकी भए राम्रो हुने थियो कि? अथवा जानकारी मात्र दिएर आरोप नै नलगाएकी भए पक्षपाती देखिने थिइनन्। कति कुराहरु त शोधकर्ताले प्रमाण दिन नसकेको पनि तिनले किटान नै गरेकी रहेछिन्।
– कमल भूजेल, फिजिक्स विभाग, मिजौराम विश्वविद्यालय।
खबरम्यागजिनमा बबिता मादेनज्यूको “कोविड-१९ : चीन किन सन्देहमा?” लेख देखेँ, दार्जीलिङ जस्तो साँघुरिएको स्थान, जुन स्थानमा आफ्नै स्थानीय स्तरको राजनैतिक विश्लेषणसम्म हुने गरेको छैन त्यस ठाँउबाट, अन्तराष्ट्रीय बहस नेपालीमा देख्न साथ नपढ़ी मन थाम्नै सकिनँ। यसरी आफ्नो सीमाना बाहिरको बहसहरु पनि दार्जीलिङमा भित्रिनु भनेको समाज विकासित हुने लक्षण हो। यो परम्पराले निरन्तरता पाउन्।
अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको बारेमा पूर्ण जानकारी कसैले पनि पाइसकेको छैन। त्यसैले यसको सही उपचार अनि रोकथामबारे पनि पुरै विश्व अन्योलमा नै छ। सङ्केत त विश्व युद्धको पो हो कि भन्ने गरिरहेको ठहर पनि छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पहिले चीनबाट निस्किएको भए तापनि भाइरस कसले गर्दा उत्पन्न भयो भन्नेमा असमञ्जसता नै छ। आरोप-प्रत्यारोप, वाक-युद्ध चलिरहेछ विश्व कै दुइ महान शक्ति चीन र अमेरिका माझ। चीन मूलत कम्युनिष्ट देश, सैद्धान्तिक रुपमा पुञ्जीवादी अमेरिकाको परस्पर विरोधी।
चीनले छोटो समयमा धेरै आर्थिक विकास गरे। आफ्नो देशमा जनतालाई लगभग सबै सुविधाहरू प्रदान गरे, अन्य धेरै विकसित देशहरुको तुलनामा। शिक्षा अनि अनुसन्धानमा अहिले अग्रिम पङ्क्तिमा चीन उभिनुकै कारण, संसारका मै हुँ भन्ने देशहरुलाई चुनौति नै साबित भइरहेको बेला हो यो। चीन मात्र होइन अमेरिकी दमनको विरोधमा जति पनि देश उभिन्छन् ती सबैलाई अमेरिकी दबदबा भएका देशहरुमा चीन वा ती देशहरु विरोधी झूटो प्रचार चलाइरहेने प्रथा छ र भारतमा पनि चीन विरोधी प्रचार निकै हुनेगर्दछ।
यसरी मादेनज्यूको लेख पढ्दा भारतीय मूलधाराको टेलिभिजन हेरेको भन्दा केही फरक नै परेन। निष्पक्षता भन्ने त थिँदै थिएन। तिनले समान दृष्टिकोणले हेरेकी होला भन्ने मेरो अनुमान गलत साबित भयो। चीनलाई लगाउनसम्मको आरोप र सन्देह खनाएकी रहेछिन् तर ती आरोपहरुको आधार भारतीय मिडिया भन्दा अलिकति पनि पर सरेकै छैन। विषय गहन थियो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रीय स्तरको। अलिकति त्यही स्तरमा अध्ययन गरेकी भए र आरोप लगाइहाल्न हतार नगरेकी भए राम्रो हुने थियो कि? अथवा जानकारी मात्र दिएर आरोप नै नलगाएकी भए पक्षपाती देखिने थिइनन्। कति कुराहरु त शोधकर्ताले प्रमाण दिन नसकेको पनि तिनले किटान नै गरेकी रहेछिन्।
तिनले शुरुमै “चीनले विश्वमा कोरोना भाइरस बाँड़े…” भनेर, आफ्नो आधारहीन तथ्य दिएर कमनसेन्सबाट मात्र विचार पोखेकी रहिछे भन्ने बुझिन्छ। कारण अहिलेसम्म यसको टुङ्गो लागेको नै छैन। तिनले सन्देह गरेको प्रश्न वा जिज्ञासाको केही छलफल यहाँ गर्नेछु जुन सान्दर्भिक छन् र उब्रेको अन्त्यमा लिङ्क दिनेछु र कति यस्ता प्रश्नहरु पनि छन् जसको ठोस् उत्तर आउन समय लाग्नेछ।
विश्व स्वस्थ्य सङ्गठन (W.H.O.) ले र US national intelligence director’s office बाट कोरोना भइरस कृतिम तरिकाले ल्याबमा तयार नगेरर प्राकृतिक रुपमा विकास भएको भनिसकेको छ। अमेरिकाले चीनलाई दबाव दिए तापनि अमेरिका स्वयंले त्यति छिटो भाइरसको स्ट्र्याण्ड कसरी पाएर मानवीय जाँच सुरु गरे भन्दा कसैलाई जवाफ दिँदैनन् । अमेरिकी कोरोना एक्स्पर्ट डा० एन्टोनीलाई सार्वजनिक किन बोल्न दिएनन्? नोभेम्बरमा नै सङ्केत पाइसकेको अमेरिकाले विश्वभरि महामारी फैलिसक्दा पनि किन रोकथाम गर्न कदम चालेनन्? मार्चसम्म के पर्खिबसेका थिए? र अमेरिकी दबावमा जति सोध-खोज गरिए त्यसको जवाबको साथमा चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको १० वटा प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले किन दिँदैन अहिलेसम्म पनि? संसार महामारीको चपेटमा पर्दा पनि अमेरिकाले चीनसँग वार्ता बन्द गर्नु किन? जबकी मिलेर ठोस् निकास लिनु पर्ने हो।
सन्देहको जाल स्वयं अमेरिकाले नै फैलाइरहेको छ। वुहान शहरमा अमेरिकी खेलाड़ीहरुद्वारा पनि भाइरस फैलिएको हो कि भन्नेमा अमेरिकामा सन्दिग्ध रुपमा मर्नेहरुको जानकारी अमेरिकाले पनि लुकाइरहेकै छ।
चीनमाथि लगाइने लाञ्छानाहरु जुन साधारण जनताले पनि बुझ्न सक्नेमा चीनले हरेक सामानको डुप्लिकेट बनाउँछन् , बेसी दिन टिक्दैन जसमा सबैले जोक्स बनाएर व्यङ्ग्य पनि गर्ने गर्छन्। साँच्चै चीनियाँ वस्तु नटिक्ने भए विश्वविख्यात ब्राण्ड एप्पलको आइफोनहरु पनि त चीनमा नै बनिने गर्छन्, नटिक्नु पर्ने हो नि, खासमा महँगो सामानहरु टिकाउ नै हुन्छन् तर जुन साधारण जनताको हातमा पुग्छ, त्यो टिक्दैन अनि दोष दिइन्छ। सस्तो टिक्नु साह्रो परेको हो तर सोच्नुहोस्, चीनले ती सस्ता कसको निम्ति बनाइदिए? – गरीब जनताको लागि। ती सस्ता फोन वा अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण भएकोले नै आज, पत्ति टिप्दैगर्दा छोरीसित बात गर्न सक्ने भएका छन्। ऐँजरु पलाको औंलाले पनि कम्प्युटरको स्क्रीन स्वाइप गर्न पाइरहेका छन्। चीन आज अरु कुनै देशमाथि निर्भर रहनु पर्दैन। आफ्नो देशलाई सर्वसम्पन्न भइरहेकोमा अन्य देशको आँखा जल्नु स्वाभाविक नै हो।
जुन-जुन देशले जनताको निम्ति केही असल काम गरेका छन् र अमेरिकाको अधीनमा बसेका छैनन् ती सबैलाई नै बदनाम गर्ने काम गरिरहन्छ। सत्य बुझ्नलाई त्यस देशकोबारेमा राम्रो अध्ययन गर्नु पर्छ, सुनेको भरमा निन्दा गर्नु बौद्धिकता होइन।
हालै उत्तरकोरियाको किम-जोङलाई मिडियाले मारिसकेको नै हो। मिडियाले त्यही मात्र प्रसार गर्छ जुन अह्राएका हुन्छन्। त्यो त हाम्रो वरिपरि नियाल्दा नै बग्रेलतै प्रमाणहरु पाइन्छन्। वर्णन गरिबस्न पर्दैन जस्तो लाग्यो।
अहिले कोरोना नियन्त्रणमा भियतनाम र क्युबाको प्रसङ्ग नै मिडियामा आउँदैन। दुइवटै सानो-सानो देशले आमेरिकालाई स्याल-खेदाई गरेकोले क्युबालाई त अमेरिकाले प्रतिबन्ध नै लगाई दिएको हो। त्यस्तो प्रतिबन्धमा परेर पनि आमेरिका अघि नझुक्ने क्युबा आज संसारकै सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रावधान उपलब्ध गराउन सफल बनेर, अन्य देशमा सहायता पठाइरहेको छ।
चीनले मेडिकल किट निर्यात गरेर खरबौं कमाएको कुरा छ तर अमेरिकाले भारतमा 50 लाख टेस्टिङ किट बेच्दा यति छिटो कसरी बनायो भनेर शङका समेत गरिएको छैन। भारतलाई अहिले अमेरिकाबाट भन्दा चीनबाट अधिक सहयोग भएकोमा पनि धेरै खोटहरु देखाइरहेको छ, सत्यपान नगरी टिप्पणी गरिहाल्न मिल्दैन तर भारतले अमिरिकालाई हाइड्रोअक्सीक्लोरोक्वीनको बद्ली हारपून मिसाइलको डील हुनु अमेरिकी नितिमाथि पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ। विश्वभरि कै जनताले बुझिसके मिसाइल चाहिन्छ कि औषधी? १९१८ को स्पेनिश फ्लुमा पनि शङ्कामा अमेरिका नै परेको हो। २००९ को एभियन फ्लुमा पनि शङ्कामा अमेरिका नै परेको हो। यी पाटा छोड़ेर न्युक्लियर डीलको कुरा गर्नु हो भने सबै देशको परमाणु हतियारको गन्ती अमेरिकाले लिन्छ तर अमेरिकाले कहिल्यै पनि आफ्नो गिन्ती यति छ भनेर सार्वजनिक गर्दैन तर उत्तर कोरियाले परिक्षण गरे तानाशाहीको संज्ञा दिइन्छ। लादेन साँच्चै नै थियो के? भन्ने विवाद अहिलेसम्म चलिरहेको नै छ। ट्वीन्स टावर अमेरिका आफैले पड़्काएका हुन् भन्ने आरोप पनि अमेरिकालाई लागेकै हो। ट्रम्पको भारतीय भ्रमणबारे केही चर्चा नै छैन।
यसरी कुनैपनि देशलाई आरोप लगाउँदा सैद्धान्तिक ढल्काई कतै पनि हुनु व्यक्तिगत कुरा हो तर आफ्नो जाति माथि अतिक्रमण गर्ने शक्तिको अन्धाधुन्ध समर्थन दिनु भनेको हाम्रो आफ्नै मान्छेले झन् दु:ख पाउनु हो।
सन्दर्भ गोर्खा समाज
मैले यसमाथि विचार पोख्न किन चाहे भने, त्यो लेख घातक पनि हुन सक्छ। सही जानकारी भएन भने झन् अज्ञानता जन्माएर खिल्ली उड़ाउछन् जान्नेहरुले (अन्य जाति) । हाम्रो समाज त्यसै त इन्ट्रोभर्ट नेचर देखाउँछन् । हामी नजान्नेहरुको माझमा ठूला-ठूला डिङ हाँक्छौ तर जान्नेहरुको अघि बहस नै गर्न मान्दैनौँ । वैचारिक आदान-प्रदानमा भाग नै लिन हिच्किचाउँछन् धेरै। त्यसैले गर्दा गाँउको क्याटिस् हान्ने नेताले पनि राजनीति शास्त्रमा मास्टर गरेकालाई गोर्खाल्याण्डको पाठ सिकाइरहेको स्थिति हो, पत्ती टिप्दै गरेकी बढीले इतिहासको शिक्षकलाई कुमार प्रधान चिनाइरहेको स्थिति हो। हामी बौद्धिकतामा निकै पछाडिसकेका छौ। डा. हर्कबहादुर र प्रोफेसर लामालाई बी.ए. को फुलफर्म नजान्नेले गाली दिइरहेको समाजमा कसैले पनि कुनै कुरा भन्दा हाम्रो समाजमा पत्त्याइहाल्छ्न्। भेरिफिकेसन नै हुँदैन कुनै पनि ज्ञानको न त ज्ञान दिने शिक्षकको नै। ज्ञानको प्रसार नै नभएको समय हो।
आज चौबन्दी फ्याकेर अमेरिकन आउटफीटमा हामी सभ्य ठान्छौँ । मोमोमा कोकाकोला पिउने भएको मनपर्छ। मातृभाषालाई हेपेर अमेरिकी एक्सेन्टमा बोल्दा उच्च ठान्छौँ । जन्मदिनमा केक काट्दा खुशी हुन्छौं । हाम्रो शरीरको नशा नशामा अमेरिकी संस्कृति बगिरहेको बेला अमेरिकालाई विरोध गर्नु भनेको नहुने कुरा नै हो। हामी अमेरिकी खोल ओढेर जातीयताको प्रश्न गर्दा ढोङ गरे जस्तो पनि लाग्छ। अमेरिकामा लाख रुपियाँ पाइने काम भारतमा केवल एसीमा बसेर काम गर्नु पाए भनेर हजार रुपियाँमा नै B.P.O. मा खटिरहेछन् शिक्षित युवाहरु रमाइलो गरेर।
अत: समाजमा नयाँ विचारको प्रसार हुनु प्रशंसनीय कार्य हो तर समाजलाई अझै पछि ढकेल्ने विचारप्रति प्रतिरोधको चेतना पनि जाग्नु आवश्यक छ। सन्दर्भ लामो भए पनि मूल आशय यति नै हो कि बहस गर्नु सचेत समाजको लक्षण हो, गरिनु पर्छ तर सही ज्ञानको पनि प्रसार हुन आवश्यक छ।
यी लिङ्कहरुमा अझ जानकारी पाउनु हुनेछ।